Airbnb.org - Izikhukhula eNtshona Yurophu
Nazi izindlu zexesha longxamiseko eDeutschland, Belgique & Nederland
Indawo yokuhlala yasimahla yanikezelwa phakathi kuka- July 19, 2021 no- August 2, 2021 kubantu ababaleke intlekele nakubasebenzi ababancedayo.
Funda ngakumbi ngoAirbnb.org
Apho abantu bendawo bakhuthazwa ukuba babonelele ngendawo
Izikhukhula eNtshona Yurophu
UAirbnb.org udibanisa abantu abachaphazelwe zintlekele kunye nababuki zindwendwe abanikezela ngendawo yokuhlala simahla. Ukususela ngo-2012, amawaka abantu aye ayisebenzisa le nkqubo.
Ndingayibhukisha njani indawo?
Ukuze uqalise, kufuneka ube neakhawunti ka-Airbnb. Xa sele ungenile kwiakhawunti yakho, siza kukubuza imibuzo embalwa ngawe nendlela ochaphazeleke ngayo. Siza kuhlola iimpendulo zakho size sibuyele kuwe ngokuqhelekileyo zingekapheli iiyure eziyi-24.
Xa sele uqinisekisiwe, uza kukwazi ukufikelela iindawo ezifumaneka simahla. Ukuba ufumana indawo ekulungeleyo, ungaqhakamshelana nombuki zindwendwe.
Molo: Ndikutshiwe endlini yam ngenxa yentlekele ibe ndidinga indawo yokuhlala. Ndiza kuza nabantwana bam ababini.
Ucinga ukuba uza kufika ngabani ixesha?
Qinisekisa ixesha oza kulihlala
Umbuki zindwendwe usenokubuza imibuzo engakumbi ngaphambi kokwamkela ukubhukisha kwakho ibe kusenokufuneka uqhakamshelane nababuki zindwendwe abambalwa ngaphambi kokuba ukuhlala kwakho kuqinisekiswe.
Funda okungakumbi ngokubhukisha
Nikezela ngendawo yakho ongayisebenzisiyo ngaphandle kokubhatalisa kubantu abadinga indawo yokuhlala okwexeshana.
Ndidinga indawo yokuhlala
Funda ngendlela uAirbnb.org awaqala ngayo
Ukususela ngo-2012, amawaka ababuki zindwendwe aye avula amakhaya awo.
Sonke sifuna ukufumana indawo apho siza kuziva sisekhaya. Indawo ecocekileyo, apho uziva wamkelekile, noza kukhuseleka kuyo.
Ukubuka iindwendwe ngexesha lenkanyamba engu-Michael
inkxaso yefowuni efumaneka imini nobusuku
Awuwedwanga. Ngaphandle nje kweqela lika-Airbnb lokunceda abathengi elifumaneka imini nobusuku, uza kukwazi ukuncedwa liqela elikhethekileyo xa unemibuzo ngokubhukisha kuka-Airbnb.org.
Nangona inqabile into yokonakaliswa kwendawo ngempazamo, siyaqonda ukuba unokufuna ukukhuselwa. Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo siza kubuyisela umbuki zindwendwe ngamnye i-$1 000 000 yomonakalo wendawo.
Nangona kungekho nkqubo yokuhlolisisa engenazimpazamo, siye sihlole abameli beenkampani zokubhukisha kunye neendwendwe ezibhukisha ngokungqalileyo zisebenzisa i-Airbnb, kuludwe lwabasemiqathangweni, lwabagrogrisi kunye nolwabantu abamele baqatshelwe.
Funda okungakumbi ngokhuseleko
UAirbnb.org ngumbutho ongenzi nzuzo ozimeleyo noxhaswa luluntu lonke osebenzisana neminye imibutho engenzi nzuzo ukuze kunikwe abantu iindawo zokuhlala zexesha longxamiseko xa besengxakini.
Ngamaphulo Amakhaya Oncedo neendawo zokuhlala Abatshotsha Phambili zakwa-Airbnb, uAirbnb usebenzisene neengingqi ukuze kuncedwe abantu abadingayo ukususela ngo-2012. Ngoku, uAirbnb umisela uAirbnb.org njengombutho ozimeleyo ukuze kuqhutyekekwe nezi nzame sezenziwe kuze kuncedwe abantu abangakumbi.
UAirbnb.org ngumbutho ozimeleyo onebhodi yabalawuli ezimeleyo. Ngumbutho woluntu onceda abangathathi ntweni ongabhataliswa rhafu phantsi kweCandelo 501(c)(3) leU.S. Internal Revenue Code. Iminikelo eya kwimibutho ephantsi ko-501(c)(3) inokufakwa njengeendleko kwingxelo yerhafu.
UAirbnb ubhatala iindleko zokuqhuba uAirbnb.org ukuze iminikelo yentsapho isebenze ngakumbi ekuncedeni abantu abasengxakini.
Indlela anceda ngayo uAirbnb.org
Funda okungakumbi ngabantu abancedwa nguAirbnb.org nendlela intsapho ka-Airbnb encede ngayo ukuza kutsho ngoku. Ingxelo yonyaka ngamnye Yendlela Ekuncedwa Ngayo yakwa-Airbnb.org iza kufumaneka engekapheli u-2021.
Intsapho yakwa-Airbnb ingaxhasa uAirbnb.org ngokwamkela iindwendwe okanye ngokunikela. Ababuki zindwendwe banokukhetha ukwamkela iindwendwe zika-Airbnb.org simahla okanye banikele ngepesenti ethile sihlandlo ngasinye bebhatalwa. Aba babuki zindwendwe baza kufumana ibheji yokuxhasa uAirbnb.org kwiiprofayile zabo. Nabani na anganikela kube kanye kuAirbnb.org nanini na.
Funda okungakumbi ngokwamkela iindwendwe zika-Airbnb.org nokunikela ngenye yemali oyibhatalwayo.
Ukwamkela iindwendwe eziza kuhlala ngexesha longxamiseko ngoAirbnb.org